I-SXSW 2014 Interactive Infographic Wrapup | Martech Zone
I-SXSW 2014 Interactive Infographic Wrapup
NgoLwesibili, ngo-Mashi 18, i-2014 NgoLwesine, Juni 18, 2015 UJenn Lisak Golding
Enye yezinto ezinhle mayelana nozakwethu uMeltwater isoftware yokuqapha ezokuxhum ukuthi ungakwazi ukuqapha izihloko nemicimbi kahle ukuze uthole isithombe esigcwele semizwa nokuthandwa. Kulo nyaka, baqale ukuqapha i-buzz ezungeze i-SXSW ngoFebhuwari 26 futhi ngathola ezinye izitayela ezinhle kakhulu:
Impimpi ye-NSA, u-Edward Snowden, bekuyinto enkulu. I-7% yayo yonke i-buzz yomphakathi yayihlobene ne-Snowden.
Abesilisa bathumele okuningi emphakathini: ama-62% uma kuqhathaniswa nama-38% kwabesifazane.
UJustin Bieber ukhulunywe ngaphezu kuka-400% kuneGrumpy Cat! (Yisho whaaaa?)
Kuzo zonke izibalo ezipholile, hlola i-infographic engezansi. Futhi ungakhohlwa ukuhlola abaxhasi bethu iMeltwater ithuluzi lokuqapha ezokuxhumana nabantu lamabhizinisi.
Ukwakha Iwebhusayithi Engenayo Ye-2014
Mar 18, 2014 ku-11: 55 AM
Hhayi okuningi ngomculo omusha noma ubuchwepheshe obusha. Angiboni ukuthi kukhulunywa ngomcimbi odabukisayo (3 life lives) we-SXSW 2014. Very telling.
Mar 18, 2014 ku-3: 11 PM
Sawubona John - Imibuzo emihle. Ngikhiqize le infographic, ngakho-ke ngizophendula: siqaphe ingxenye engqungqutheleni yengqungquthela ikakhulukazi, eqale ngoMashi 7-11. Ngakho-ke, ayikhulumi ngengozi enyantisayo eyenzeka ngoMashi 12. Siyavuma ukuthi kuyathakazelisa ukuthi bekungekho ukuxoxa okuningi ngobuchwepheshe obusha ngalesi sikhathi. Futhi, njengomuntu owayeseRed River ezinsukwini ezimbili ngaphambi kwaleyo nhlekelele embi, inhliziyo yami iyazwela kubo bonke abathintekile yiyo.